Diraya faylal waaweyn: waa kee aaladda ugu fiican ee bilaashka ah? | Abuurista khadka tooska ah
Bal qiyaas xaaladda. Waxaad uun u dhamaysay mashruuc macmiil. Waa inaad u dirtaa emayl dhammaan walxaha aad ka shaqaysay iyo tayada ugu fiican ee suurtogalka ah. Marka waxaad fureysaa emaylkaaga si aad ugu dirto asaga iyo, ma awoodid? Ha welwelin, way ka badan tahay intaad moodeysid. U dirista feylasha waaweyn adoo u maraya wadiiqooyinka caadiga ah macquul maahan, laakiin nasiib wanaag waxaa jira aalado kale oo kaa caawin kara inaad u hesho waxaad rabto qofka helaya.
Marka xigta waanu kaala hadli doonaa sida loo diro faylal waaweyn, qalab noocee ah ayaad haysaa, bilaash, inaad ku sameyso, iyo sida loo sameeyo xitaa mobilkaaga. Aynu yeelno
1 U dir faylal waaweyn, maxaa diidaya inaad u dirto boostada?
1.4 Fadlan soo dir Firefox
U dir faylal waaweyn, maxaa diidaya inaad u dirto boostada?
Waxa caadiga ah, markaad rabto inaad dirto feyl, ha noqdo pdf, sawir, iwm. waa in la isticmaalo emaylka. Laakiin kuwani waxay leeyihiin xaddidnaanta cabbirka lifaaqyada, oo intay kuu oggolaanayaan inaad isticmaasho kaydinta daruurta, mararka qaarkood kuma filna waxaad rabto inaad dirto. Sababtaas awgeed, qalab badan ayaa soo baxay oo ka caawinaya dirista faylal waaweyn adigoon isticmaalin boostada, inbadan oo ka mid ah waxay ku siinayaan isku xir fudud oo aad ku soo dirto, ama boosto, WhatsApp, Telegram ...
Laakiin, Maxay yihiin qalabka ugu fiican ee halkaa yaal? Waan kuu sheegeynaa.
Shaki la'aan, WeTransfer waa aalad laga yaqaan adduunka oo dhan. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad u dirto ilaa 2GB iyo 10 qaatayaal kala duwan hal mar, taas oo aad u badan. Waxa kaliya ee ku xaddidaya waa cabbirka waxa ay tahay inaad dirto; taasi waa, waxaad awoodi doontaa inaad ku dhejiso dhammaan faylasha aad rabto, laakiin guud ahaan, kuwani waa inaysan ka badneyn cabir ahaan 2GB.
Waqtiga la dirayo, waxay ku siinaysaa laba ikhtiyaar: in aaladda lafteeda ay mas'uul ka tahay dirista emaylka qofka ay tahay inuu ku helo la xiriiriyaha si uu u soo dejiyo; ama waxay ku siineysaa isku xirka si aad u nuqulan karto ugana soo diri karto kanaalka aad rabto.
Waxa ugu fiican ee ku saabsan aaladda ayaa ah taas Muhiim ma aha in la diiwaangeliyo, mana xaddiddo bixinta (tusaale ahaan, kaliya hal rar x saac kasta ama maalin kasta), laakiin waxa ugu xun ayaa ah in xaddidaadda 2GB, in kastoo lagu bixin karo nooca lacagta la siiyay, kaas oo kuu oggolaanaya inaad dirto illaa 20 GB sidoo kale waxaad leedahay 1TB oo kaydinta la heli karo ah .
Tani waa wax badan in yar loo yaqaan qof walba, laakiin wali si fiican ugu fiican waxa ay qabato. Bilaabeyaasha, waxay kuu oggolaaneysaa inaad dirto faylal waaweyn oo aan xad lahayn. Hadda, si aad u sameyso, waxaad leedahay laba siyaabood. Hadduu ka yar yahay 10GB, markaa waxaad samaynayso waa inaad ku kaydisaa daruurta, sidaa darteed qof walba wuu soo dejisan karaa. Laakiin haddii ay ka weyn tahay kuwa 10GB ah, waxaa loo wadaagi doonaa sidii nidaam P2P ah. Taasi waa, sida haddii aad soo dejisay durdur.
Waxa kaliya ee xun ee aan ku aragno nidaamkan, oo laga yaabo inay sabab u tahay sababta aadan u rabin inaad isticmaasho, ayaa ah inaad ku rakibto codsi kombiyuutarkaaga, wax dad badani door bidaan inay iska ilaaliyaan qiima kasta ha lahaadee. Laakiin haddii aadan taas ka fikireynin, hubaal waad u isticmaali kartaa dhib la'aan.
Qalabkani waa mid kale oo si fiican loo yaqaan marka ay timaado dirista faylasha waaweyn. Waxa ugu fiican ee ku saabsan waa inaad u diri karto feyl, oo aan xad lahayn xaddiga, hal qaate. Oo waxaa la heli doonaa oo keliya 3 maalmood. Hadda, waxay leedahay meel taban oo taasi waa taas, in kastoo Waa bilaash, waxay leedahay dhibaatada ah inaad diiwaangeliso si aad u isticmaasho.
Fadlan soo dir Firefox
Ma ogtahay in biraawsarka Mozilla Firefox uu awood u leeyahay inuu diro faylal waaweyn. Ha walwelin, annaguna sidoo kale. Taasi waa sababta aan ugu talineyno. Qalabkani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad dirto feylasha ilaa 1GB haddii aadan isdiiwaangalin, illaa 2,5GB haddii aad diiwaangeliso, oo leh xiriiriye wuxuu dhacayaa x waqtiga (sidaa darteed waad ogtahay in faylashaadu aysan had iyo jeer ku jiri doonin daruuraha).
Waxa kaliya ee xun ee kiiskan waa xaddidaadaha, maadaama haddii faylka la dirayaa uu ka weyn yahay, waa inaad isticmaashaa kuwa kale.
Markaad ka hadlaysid aaladaha maalinlaha ah, ku dhowaad qof walbaaba wuxuu horey u haystay emayl Google ku jira Gmail. Midkani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad kaydsato 15GB Google Drive. Marka waxaad u diri kartaa feylal waaweyn kuwa aad rabto oo leh xaddidaadda booskaas.
Haddii waxa aad u baahan tahay ay tahay inaad geliso feylal waaweyn laakiin aadan rabin inaad wax bixiso si aad u sameyso, sidee ku saabsan isku dayga qalabkan? Kuu ogolaanayaa inaad ku lifaaqan faylasha illaa 5GB oo leh nooca bilaashka ah. Si kastaba ha noqotee, waxaad sidoo kale ku gaari kartaa 100GB mid ka mid ah lacagta la bixiyay.
Intaa waxaa dheer, waxay ku siineysaa 1TB oo ah kaydinta daruuraha joogtada ah.
Kahor intaan WeTransfer la aqoon oo laga isticmaalin adduunka oo dhan, MediaFire waxay ahayd tii la dooran jiray. Waa qalab ku siinaya ilaa 10GB oo ah kaydinta daruuraha, iyo bilaash! Intaa waxaa dheer, faylasha waxaa lagu wadaagi karaa emayl, xiriiriyeyaal, ama xitaa warbaahinta bulshada.
Gambaleel ma yeero? Isdeji, waa iska caadi. Laakiin waxaan dooneynay inaan kaaga sheegno sababta oo ah waa qalab lagu soo saaray Spain. Kuu ogolaanayaa inaad amarto illaa 50 faylal ah, iyo illaa 5GB cabir ahaan, ugu badnaan 20 qof markiiba markiiba adoo u diraya emaylka (ama waxay ku siineysaa xiriirin si aad ugu dirto qofkii aad rabto).
Waxa ugu fiican ayaa ah inaadan isdiiwaangalin, dukumiintiyada aad soo gelisana waxaa la heli doonaa oo kaliya 7 maalmood, kadib waa la tirtiri doonaa.
Ma dooneysid xaddiga cabbirka? Waa hagaag, waxba, qalabka burburin wuxuu noqon karaa waxaad raadineysay. Kaa codsan mayso inaad isdiiwaangaliso inaad isticmaasho, iyo kanaga faylasha waxaa la heli karaa oo keliya 14 maalmood. Haddii aad rabto inay sii dheeraadaan, waxaad dooran kartaa qorshooyinka lacag bixinta, halkaasoo ay sidoo kale kaa siin doonaan tirakoob ku saabsan soo dejinta.
Hadaad ubaahantahay dir faylasha culeyskoodu yahay 50 GB, tani waxay noqon kartaa xalkaaga, maxaa yeelay waa lacag la'aan. Muddo 7 maalmood ah ayay ku sii jiri doonaan daruurta, ka dibna waa la waayi doonaa. Intaas waxaa sii dheer, waxay ku siinayaan bilaa diiwaangelin si aad u ogaatid inta jeer ee faylka la soo degsaday ama goorta uu dhacayo.
Hadda, dhibaatada qalabkan ayaa ah inaysan jirin wax sir ah, taasi waa, faylashaadu ammaan ma ahaanayaan illaa aad bixiso qorshaha lacag bixinta.
Sidaad arki karto, waxaa jira ikhtiyaarro badan oo aad kala dooran karto, sidaa darteed haddii ay tahay inaad dirto feylal waaweyn, ha ka welwelin, waxaa jira qaabab badan oo loo sameeyo si ay u gaaraan qofka ay heystaan ​​ama kuwa ay heystaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tricks » Diraya faylal waaweyn: waa kee aaladda ugu fiican ee bilaashka ah?